Airplane mode: kuti chii, kuti ndechei uye kuti ungaimisa sei nekuimisa - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | Updated on 31/05/2022 08:34 | Kugadziriswa
Semutemo wakajairwa, tinorangarira maitiro endege patinokwira ndege nekuti tinoziva kuti, panguva yekubhururuka, tinofanira kubvisa nharembozha kana kuiisa, sezvavanotitaurira pamusoro pehurongwa hwekutaura kwevanhu, "ndege mode".
Asi chii chaizvo? Ndechei? Unopfeka uye unobvisa sei? Pane manomano nekushandiswa kwayo here? Kana ukazvibvunzawo, tichakupindura zvose.
1 Chii chinonzi airplane mode
2 Ndeipi mode yendege inoshandiswa?
2.1 kurara zviri nani
2.2 Sevha bhatiri
2.3 Nyora paWhatsApp usingaonekwe
2.4 Tangazve zvibatanidza
3 Mabatidza nekudzima modhi yendege
3.1 Batidza uye dzima pa Android
3.2 Batidza uye dzima pa iPhone
3.3 Activate uye deactivate pakombiyuta
Chii chinonzi airplane mode
Muitiro wendege inonyatso gadziriso yauinayo panharembozha yako, kunyangwe iripo pamapiritsi, malaptop, makomputa... Chinangwa cheizvi ndechekubvisa mawireless connections, ingave WiFi, data yefoni, kufona kana meseji chiratidzo kana kunyange Bluetooth.
Izvi zvinoreva kuti foni haichashandiswi zvachose, sezvo usingazokwanisi kufona kana kugamuchira mafoni, kana SMS uye zvikumbiro hazvishande. Avo chete vasingashandise Indaneti vanogona kushanda, asi imwe yasara yaizomiswa kusvika iyi modhi yadzimwa.
Chikonzero nei ichinzi nenzira iyi imhaka yekuti yainongedzera kuchirambidzo chaivepo makore apfuura umo kana uchifamba nendege waisakwanisa kushandisa nharembozha yako nevagadziri, nechinangwa chekusadzima nhare, vakagadzira iyi marongero.
Kunyangwe nhasi zvichizivikanwa kuti hapana chinoitika chekusaitetesa mundege, vanoramba vachichikurudzira, uye kunyange kubvumira. Nekudaro, kubvira 2014 inogona kubhururuka isina kuimisa (inobvumidzwa neEASA kana European Commission). Ramba uchifunga kuti, kunyangwe izvi zvingangoitika, indege dzine izwi rekupedzisira pane izvo zvinogona uye zvisingakwanisi kuitwa mundege.
Ndeipi mode yendege inoshandiswa?
Chokwadi wakamboshandisa ndege modhi pane imwe nguva, uye kwete chaizvo kubhururuka. Uye ndezvekuti, kunyangwe kushandiswa kwayo kukuru kuri uku, ine zvakawanda zvekushandisa zuva nezuva. Zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa ndezvizvi:
kurara zviri nani
Tichifunga kuti isu tiri kuwedzera kubatana nemidziyo (nhare, piritsi, komputa), muviri wedu unobata kune chero ruzha runobva kwavari, zvekusvika pakupepuka pakati pehusiku kuti azive kuti chii chasvika.
Uye izvozvo zvinokuvadza hope dzedu.
Nokudaro, kushandisa ndege modhi inzira yekumbomira nhare pasina kuidzima uye kukubvumira kuva nemaawa mashomanana ekuzorora uye kuzorora kuti muviri wako uchakutendai.
Kumwe kushandiswa kunowanzo shandiswa kwendege mode kuchengetedza bhatiri. Kuve neinternet, bluetooth, uye zvimwe zvakawanda zvinongedzo zvakavhurika nguva dzose zvinozivikanwa kudhiza bhatiri. Kana uine zvishoma zvasara, kuimisa kunogona kukubatsira kuichengeta, kunyangwe iine dambudziko uye ndezvekuti unosiya foni pasina mukana wekutaurirana..
Chimwe chinhu chisina kusimba chingave kubvisa iyo data neWiFi kuitira kuti isabatana.
Nyora paWhatsApp usingaonekwe
Iyi ingangove imwe yeanonyanya kushandiswa nevakawanda, uye Inosanganisira kubatidza nzira yendege kuti ukwanise kuona nyika kana kupindura kune mameseji pasina "sneak" ichioneka. 'Kunyora' patinenge tichipindura.
Izvi zvinoreva kuti unogona kutora nguva yako uchipindura, kana kungotora nguva kubva muapp usina kuwana mameseji.
Iko kushandiswa kudiki kunozivikanwa, asi kunoshanda zvakanyanya kana kubatana nefoni yako kuchipa matambudziko (iwe hauna chiratidzo, inocheka, haugone kunzwa zvakanaka, nezvimwewo). Kana zvikaitika, kutikubatidza nekudzima modhi yendege mukati memaminitsi mashanu kunogona kubatsira kugadzirisa patsva uye tangazve zvibatanidza.
Muzviitiko zvakawanda, izvi zvinobatsira kugadzirisa matambudziko.
Mabatidza nekudzima modhi yendege
Iye zvino zvawava kuziva zvakawanda nezvemaitiro endege, yave nguva yekuti iwe uzive nzira yekuimisa nekuimisa panharembozha yako, ingave Android kana iPhone.
Chokwadi ndechekuti zviri nyore nekuti kazhinji zviri mukukurumidza kutonga kwefoni. Asi kana usati wamboida uye usingazive kuti iripi, tinokuitira nyore.
Batidza uye dzima pa Android
Tinotanga nemafoni eAndroid. Chokwadi ndechekuti pane nzira dzinoverengeka dzekuimisa (uye nekudaro kuimisa) saka une sarudzo:
Kushandisa bhatani rekudzima. Kune nharembozha dzekuti kana ukadzvanya nekubata bhatani remagetsi, zvinokupa menyu diki usati wadzima zvachose, rimwe remabhatani riri rendege. Ndiyo nzira yendege uye nekudzvanya unogona kuimisa (uye kuimisa zvakafanana).
Mune Android marongero. Kana iwe ukaisa bhatani rezvigadziriso pafoni yako, unogona kunge uine injini yekutsvaga, kuitsvaga kana ikasabuda. Asi kazhinji inozoonekwa: kumusoro kwemenu kana muWiFi uye nharembozha. Iwe unongofanira kuimutsa uye ndizvozvo.
mubhaa yekuzivisa. Kana iwe ukadzikisa bhatani rekuzivisa (iwe unotora chigunwe chako kubva kumusoro kusvika pasi) uye ipapo, mukukurumidza kuwana zvidzoreso, unenge uine bhatani remufananidzo wendege kuti uite (kana kuimisa) iyo.
Batidza uye dzima pa iPhone
Kana nharembozha yako iri iPhone, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogara uchiiwana yakafanana neiri pa Android, kureva:
Mune zvigadziriso menyu yefoni yako, kungave kwekutanga kana kutarisa paWiFi uye zvinongedzo.
Pakati pekutonga kwe iPhone yako.
Activate uye deactivate pakombiyuta
Tisati tataura kuti kune akawanda malaptop uye makomputa ane bhatani rendege mode. Panyaya yekombuta yeshongwe, kushandiswa kushoma kwazvo, kunze kwekunge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingedzo, zvinogona kushandiswa kushandiswa zvakanyanya.
Kuita uye kuimisa zvinoenderana nekuti unoshandisa Windows, Linux kana Mac pakombuta yako, asi mune dzinenge dzese unozviwana zviri nyore nekuitsvaga mune main menu yekutsvaga injini kana nekutsvaga chiratidzo nendege (yakafanana neiya iri pafoni yako).
Ehezve, rangarira kuimisa mushure, zvikasadaro, kunyangwe ukaedza sei kubatanidza kunetiweki gare gare, hazvibvumire.
Sezvauri kuona, nzira yendege, kunyangwe iyo yakatanga kugadzirirwa ndege, nhasi ine zvakawanda zvekushandisa. Iwe unongofanira kuipa mukana uye edza. Hapana chinoitika kuva chinguva chidiki pasina iyo mobile.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Kugadziriswa » Airplane mode: kuti chii, kuti ndechei uye kuti ungaimisa sei nekuimisa
Nzira yekuziva sei kana komputa yangu iri 32 kana 64 bits